I-Duplex i-Stainless Steel 2205 abavelisi kunye nabathengisi | Sekonic
Engayi Stainless 2205
Amagama aqhelekileyo oRhwebo: 2205, UNS S32205, 00Cr22Ni5Mo3N,Nombolo 1.4462
Iphindwe kabini yenziwe ngentsimbi eshayinayo I-alloy ye-2205 yinto ephindwe kabini yenziwe ngentsimbi eshayinayo iqulathe 22% chromium, 2.5% molybdenum kunye 4.5% nickel-nitrogen ingxubevange. Iphakamileyo amandla , Ubunzima bempembelelo elungileyo kunye nokulunga ngokubanzi koxinzelelo kunye nokumelana noxinzelelo lwasekhaya.Amandla emveliso 2205 kabini engatyiwa intsimbi ingaphezulu kwesibini oqhelekileyo intsimbi ye-austenitic . Eli nqaku lenza abaqulunqi ukuba banciphise ubunzima xa kuyilwa iimveliso, zisenza le ngxubevange isebenze ngakumbi kune-316 kunye ne-317L. Le ngxubevange ilungele ngokukodwa uluhlu lobushushu lwe -50 ° F / + 600 ° F.
Duplex Stainless 2205 Chemical Ukwenziwa
ukwenziwa kweekhemikhali C Hayi Mnu P S Kr Ni Mo N
umgangatho -0.03 Ixabiso elipheleleyo Ixabiso elipheleleyo .040.04 -0.03 21.0 ~ 24.0 4.5 ~ 6.5 2.5 ~ 3.5 0.08 ~ 0.2
ngokubanzi 0.025 0.6 1.5 0.026 0.001 22.5 5.8 3.0 0.16
Duplex Stainless 2205 Physical Properties
Engayi Stainless 2205 Properties Properties
Brinell yobulukhuni HB
Duplex Stainless 2205 iMigangatho kunye neenkcukacha
I-ASME SA 182, ASME SA 240, ASME SA 479, ASME SA 789, ASME SA 789 Icandelo IV Code Case 2603
I-ASTM A 240, ASTM A 276, ASTM A 276 Imeko A, ASTM A 276 Imeko S, ASTM A 479, ASTM A 790
I-NACE MR0175 / ISO 15156
I-Duplex Stainless 2205 yeeMveliso ezifumaneka kwiiSekonic Metals
Isinyithi i2205 neeBhari kunye neentonga
Intsimbi ye-2205 Wire
Isinyithi i-2205 sheet kunye nepleyiti
Isinyithi 2205 ityhubhu engenamthungo kunye nombhobho oshushu
Isinyithi se-2205 kunye nekhoyili
Izinto zokubopha zentsimbi 2205
Ezi zinto ziziintlobo zeBolts, izikrufu, iiflanges kunye nezinye izinto ezihamba phambili, ngokweenkcukacha zabathengi.
Kutheni duplex Stainless 2205 ?
1) Amandla esivuno angaphezulu kokuphindwe kabini kunentsimbi yesiqhelo ye-austenitic, kwaye ineemfuno eziyimfuneko zokwenza
Iplastiki eyaneleyo. Ubungakanani bodonga lweetanki zokugcina okanye iinqanawa zoxinzelelo ezenziwe ngentsimbi engenasici engaphantsi kwe-30-50% ngaphantsi kwe-austenite esetyenziswa ngokuxhaphakileyo, eluncedo ukunciphisa iindleko.
2) Kuye nokumelana ezibalaseleyo uxinzelelo umhlwa ngozi. Ngaphandle kwesinyithi esingenasici esine-alloy kunye nomxholo we-alloy ophantsi kakhulu unokuxhathisa okuphezulu koxinzelelo lokuqhekeka komhlwa kunentsimbi engenasici ye-austenitic, ngakumbi kwindawo enee-chloride ion. Uxinzelelo lwe-corrosion yingxaki ebalulekileyo ekunzima ukuyisombulula ngentsimbi yesiqhelo ye-austenitic.
3) nokumelana ka-2205 engayi steel stainless, nto leyo ixhaphakileyo esetyenziswa kumajelo eendaba ezininzi, kungcono ngaphezu 316L austenitic steel stainless, lo gama super engayi insimbi iye nokumelana eliphezulu kakhulu. Kumajelo eendaba athile, anje nge-acetic acid kunye ne-formic acid Inokuthi ithathe indawo yentsimbi ephezulu ene-austenitic insimbi kunye nealloys enganyangekiyo nokubola.
4) Kuye nokumelana elungileyo zasekuhlaleni. Xa kuthelekiswa ne-austenitic insimbi kunye nomxholo efanayo ingxubevange, yayo banxibe nokumelana kunye nokudinwa ukumelana umhlwa zingcono intsimbi austenitic.
I-5) Umlingani wolwandiso lomgama ungaphantsi kunesinyithi esingenasici se-austenitic, esikufutshane neso sentsimbi yekhabhoni. Kufanelekile ukuba idityaniswe nekhabhoni yentsimbi kwaye ibalulekile kubunjineli, njengokuveliswa kweepleyiti ezidityanisiweyo okanye iileyile.
I-6) Nokuba iphantsi kweemeko zomthwalo oguqukayo okanye ongashukumiyo, inamandla amakhulu okufunxa amandla kunentsimbi engenasici ye-austenitic. Le yeyamacandelo ezakhiwo anokumelana neengozi ezenzeka ngequbuliso ezinje ngeengozi kunye nokudubula. Intsimbi engenasici engenanto inezibonelelo ezibonakalayo kwaye inexabiso lesicelo esisebenzayo.
Engayi Stainless intsimi 2205 yesicelo:
Imikhumbi yoxinzelelo, iitanki zokugcina uxinzelelo oluphezulu, imibhobho yoxinzelelo oluphezulu, izixhobo zokufudumeza ubushushu (ishishini lokulungisa imichiza).
• Imibhobho oyile negesi, nokufakwa ubushushu umzimba.
• Inkqubo yokucocwa kwelindle.
• Umgangatho kunye nomgangatho wephepha lokuhlela, izixhobo zokugcoba, ukugcinwa kunye neenkqubo zokucwangcisa.
• Imigodi yokujikeleza, ii-roll rolls, ii-blades, i-impellers, njl.njl.
• Iibhokisi zemithwalo yeenqanawa okanye iilori
• Izixhobo zokulungisa ukutya
Egqithileyo Yenziwe ngentsimbi eshayinayo F55 Bar / Plate / Pipe
Okulandelayo: I-TIG / MIG ERNiFeCr-2 Inconel 718 yeWelding Wire
I-2205 intsimbi engenasici
Ibha yentsimbi ye2205
Umbhobho wentsimbi ka-2205
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo 2205
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo PH15-7MO
iringi yesitayile, Ucingo lweWelding, Isitayile 6, Isitayile 6B, IHaynes 25 Intambo, Yenza ingxubevange R26 evulwa,